Ngo-2011, i-Apple wenza inguquko entsha - wakhuluma smartphone yabo. Ukuvela "Siri" imakwe enkathini entsha Gadget. Abasebenzisi bakwazi ukufinyelela igajethi yabo njengoba umuntu ocela kubo (hhayi) imininingwane ebalulekile. Isimo sezulu, izikhumbuzo, futhi imeyili entsha manje kungenzeka ukufunda ngaphandle kokuba ukuya kusuka lokusebenza isicelo. Yiqiniso, ezinye izinkampani zobuchwepheshe kanye abenzi smartphone akakwazanga ukuhlala kude, futhi wanquma ukubonisa izinqumo efanayo, ntshashintshe ngoba ungcono noma kukubi kakhulu "Siri". Kulesi sihloko asikhulume mayelana analogue best of Siri i-Android, kude kangakanani wangenela intuthuko futhi ukuthi lezi analogue ziyakwazi.
Naphezu kweqiniso lokuthi isevisi ye-Google Manje ihlukile kwezinye abasizi izwi, it namanje kubhekwa i Analogue of "Siri" ukuze "Android". I-Google Now - kuba intelligence yokufakelwa ohlala ifoni yakho, owazi konke mayelana izithakazelo zakho, izindaba, indiza olandelayo futhi izenzakalo zekhalenda. Ngaphezu imisebenzi kaNobhala, i-Google Now ubhekana ekutholeni ulwazi kuwebhu. Ithimba KULUNGILE, Google isibe cult futhi usiza izigidi zabantu ukuba uthole izimpendulo zemibuzo yabo nsukuzonke. I-Google Now ingaqoqa usesho lwakho imibuzo futhi zisuselwe kuzo ukubonisa ulwazi olufanele. Ngokwesibonelo, kuzisesha amathikithi omdlalo we ithimba lakho ozithandayo. Kulokhu, i-Google Now uzoqala ukuba akuthumele ikhadi ngolwazi mayelana umdlalo oluzayo, omunye imidlalo ithimba futhi intuthuko yabo kulo mqhudelwano.
"Umsizi" - isigaba esisha ekuthuthukiseni-Google Now. It Siri ukuba "Android" e ukusebenza okuhamba phambili. Umsizi nje ngobuchule kuneyokuqala, kodwa futhi obusebenzayo kakhulu. Ingakusiza ukudala izikhumbuzo, izenzakalo zekhalenda bese uthumela imiyalezo. Vdarit ufuna ukuba kuzamazame endleleni ukusebenza? Buza "Umsizi" ukukuvumela phezulu amathrekhi best uhlobo, futhi kuyoba ngawe lwadlalwayo ephelele.
Awazi yini igama libhalwa uphawu? Buza "Umsizi" kwisi olimini lwakho, ngoba aphelele indima sezilimi futhi uyazi ngezilimi ezingaphezu kuka-100.
Lokhu akwanele? "Umsizi" kuyokusiza ukuxhumana gijimi ngokukhetha amazwi akhe ngawe, izinsuku kanye nemininingwane yokuxhumana nawe uma ucelwa ukuba wenze njalo. Futhi "Ukusiza" Ungenza ihlaya, xoxa indaba noma ukunikeza iseluleko lapho engcono ukubeka iKhabhinethi.
Microsoft muva idume engapheli yayo (futhi akuphumelelanga) ezama ukubamba abaphikisi ngokwethula izici ezifanayo ku kumadivayisi wabo nasezintweni zobuchwepheshe zamuva izimbangi. Microsoft akazange anqikaze ukwenza futhi abanye Analogue of "Siri" ukuze "Android". Igama lakhe Cortana (lokhu kukhulunywa ongomunye wabalingiswa kule mdlalo Halo). Empeleni, lokhu umsizi cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka izimbangi zayo. Microsoft Uzame ahlale ezihlalweni ezimbili, ngakho isibononisi, namakhadi smart, uvuma umsebenzisi ethize, nesihawu wesifazane-engumngane, okuyinto kwakha umuzwa zokuxhumana bukhoma.
Eqinisweni, i-umsizi akuyona uhlakaniphe kakhulu, cishe yonke imininingwane kwakuyodingeka ube bondliwe ngesandla. izintshisekelo zakho bese izifiso, yena akunakwenzeka ukuba kwazi muntu, uma kuphela ngoba idinga ukusebenzisa amasevisi e-Microsoft, futhi akekho omunye. Ngakolunye uhlangothi, uma isikhathi Cortana kanye ukufundisa, bese iqala ukuthumela izaziso ewusizo kakhulu, ngokwesibonelo, bonisa zokudlela ezishibhile eduze nawe, kinonovinki zokugcina uyeza yeshashalazi edolobheni lakho. Cortana ukobana uhlu yezitolo uma uya esitolo noma ukubonisa isimo sezulu sesonto elilandelayo.
Yilokho ngempela isikhathi eside ngempela okwadingeka ukukopisha imibono izimbangi ', ngakho-ke Samsung. Ngo-2017, kanye Galaxy S8, onjiniyela Korean engasibonisanga entfutfukweni yabo emkhakheni intelligence yokufakelwa, okwakubizwa ngokuthi i igama engavamile Bixby. Kuyini ezithakazelisayo, Bixby - akuyona nje Analogue of "Siri" ukuze "Android". Lena yisevisi self-yokufunda eziyinkimbinkimbi, ukulungele ukunikeza amathiphu usuku uthole ukwaziswa okuwusizo. Ukusebenza akuyona okuningi ezahlukene kusukela "Umsizi-Google» futhi iningi Siri, ngakho ake sixoxe i umehluko obalulekile.
Okokuqala, Bixby uyaqonda simongcondvo has ukubekezelelana yobuchopho. Okungukuthi, uma ambuza ukuthi ngubani lo UMarlon Brando, bese, kulokho movie yena wayedubula ebhekise ngaphandle kokukhuluma igama, Bixby, ukuhlaziya inkhulumomphendvulwano yakho kanjalo uyokuqonda bangobani. Okwesibili, Bixby ukwazi ukusesha ukuze uthole ulwazi kwikhamera. Lokhu kusho ukuthi kwanele uwulethe into noma into - Bixby bese bakutshele konke ngaye, uyazi-Inthanethi.
Awu, Analogue zokugcina "Siri" ukuze "Android" ngesiRashiya - kuyinto "Alice". Sekuyisikhathi eside "Yandex" bahlakulele umqondo ingqondo yokufakelwa futhi sezwi, ngakho-ke kwaba sobala ukuthi ngesinye iphrojekthi enjalo bakwazi ukubona umkhanyo. Alice uyazi konke, bayazi ukuthi ezinye abasizi, kodwa bazivumelanisa emakethe Russian futhi ngifuna ulwazi amasevisi Yandex. Alice njengase Bixby, uyaqonda umongo, kodwa izihloko ezithile. Ezimweni eziningi, kuba sikwazi ukuphendula umbuzo owodwa kuphela. Alice kungaba ingoma noma funny ihlaya ngawe, uma isizungu, futhi kungaba ukucinga ulwazi ebalulekile "Wikipedia" is hhayi ukukufuna ngenkani wena ukuthuthela ukucinga kanye esihlokweni ngokwaso. Hhayi ngaphandle amaphutha lokhona ekuphimisweni, kodwa zinikezwe yokuthi "Yandex" namanje inkampani yasendaweni, ungaqiniseka ukuthi konke ukushiyeka ukulungiswa ngokushesha.
Indlela yokuvula i-port 25565 for Minecraft ku-Windows 7
Security: indlela sokushintsha iphasiwedi ku-router?
Indlela sifake isongo "Shambala". ekilasini Master